Eminyakeni eyi-10 ngemuva kwengozi yaseFukushima. Sinjani isimo? | Isimo Sezulu Senethiwekhi
UMashi 11, 2011 owedlule uzohlala ukhunjulwa yiwo wonke umuntu, ikakhulukazi amaJapan. Usuku lokuzamazama komhlaba okukhulu kakhulu emlandweni wezwe. Kwakungu-9.1 esikalini sikaRichter futhi kwakhiwa i-tsunami yamamitha ayi-15 ehlasela lonke ugu olusenyakatho-ntshonalanga yeJapane. Njengoba ukuzamazama komhlaba kwakukubi kakhulu, i Isikhungo samandla enuzi saseFukushima Daiichi yaphela ugesi futhi yabangela ukuncibilika okuyisisekelo kwezinsimbi zayo ezi-3 kwezingu-6.
Kulesi sihloko sizobuyekeza iminyaka eyishumi kusukela kwengozi yaseFukushima
1 Ukulimala kabi
2 Ngemuva kwengozi yenuzi yaseFukushima
3 Ubumbano lomphakathi
Yize sifundile ekwehlulekeni kuwo wonke umlando, kusenamanxeba amaningi amabi okufanele avaleke. IFukushima iphawulwa ngawo wonke umlando wamandla enuzi okwakuyinhlekelele eyenziwe ngumuntu. Kusenendawo engcolisiwe ezothatha amashumi eminyaka ukuhlanzwa, isitshalo ukudiliza kwaso kuphakamisa imibuzo ngezinkinga ezingaba khona kanye nezinkulungwane zamamitha ayi-cubic wemfucumfucu enobuthi osekunqwabelene ngaphandle kwesisombululo. Kukhona nezinkinga zomthetho kanye nokujula nokungathembani kwabantu ngamandla enuzi.
Cishe bangu-2.500 6.000 abantu abasadukile ngokusemthethweni. Kulaba bantu abafayo bangezwa abantu abayizi-XNUMX abanokulimala okunzima nemali edingekayo cishe ama-euro ayizigidi eziyizinkulungwane ezingama-235.000 akufaki konke ukuhlanzwa kweFukushima Daiichi nezindawo ezizungezile. Ngaleso sikhathi, abahlali abayizigamu zesigidi basuswa lapho bafakwa khona endaweni yokuchitha ngenkani amakhilomitha angama-20 azungeze isizinda samandla enuzi. Manje sekunabantu abangama-36.000 abangakakwazi ukubuya, yize abaningi becabanga ukuthi isibalo sangempela singaba ngaphezulu kakhulu kunesibalo esisemthethweni.
Usizo lukahulumeni lwabo bonke abantu obekufanele bahambe nezinkulumo zomsebenzi wezitshalo kubo bonke abasusiwe seziphelile. Umonakalo usabucayi impela ngisho nangeshumi leminyaka ngemuva kwenhlekelele. Elinye ledolobha ukuthi ibanga lokususwa okuyimpoqo yilona elihlupheke kakhulu. Akunakubakhona abantu abakwazile ukwakha izimpilo zabo ngokuphelele ngemuva kwale nhlekelele.
Ngemuva kwengozi yenuzi yaseFukushima
Kusobala ukuthi inhlekelele enjalo yenuzi idala imiphumela eminingi ngokwengqondo, kanti ezinye izifo zomzimba ezinjenge-hypertension noma isifo sikashukela sekuyimikhiqizo ejwayelekile kakhulu yengcindezi. Endaweni yokukhipha kukhona I-2.4% eseyindawo enenzuzo enzima ngenxa yobuningi bemfucumfucu enemisebe ye-radioactive okungaholela ekufeni. Kukhona nezinsolo ezithile mayelana nempilo yezindawo ezivulwa ngalesi sikhathi.
IGreenpeace isilahlile ukuthi i-85% yayo yonke indawo yokuhlanza ukungcola uhulumeni abhekele kuyo isakhombisa amazinga anobuthi we-cesium angaba yingozi kubantu abahlala lapho. Kodwa-ke, uhulumeni waseJapan uqinisekisa ukuthi zonke izingozi zezempilo ziyalawulwa nokuthi izindawo ezivulekileyo ziphephe ngokuphelele. Izama ukuletha umyalezo wokuthula emidlalweni yama-Olimpiki ukuze ibe ngumbukiso omuhle wokutholwa kwendawo. Isibani se-Olimpiki sizoqala ngokuhamba kwesikhathi kule nyanga eFukushima. Uhambo oluya eTokyo, eFukushima lusingatha imincintiswano eminingana. Ochwepheshe baveza ukuthi awukho umphumela olimazayo empilweni yabakhileyo otholakele ongabangelwa ukuchayeka emisebeni.
Yilapho ubumbano lomphakathi lungena khona. Kubalulekile ukuthi kube nobumbano ngasohlangothini lwabantu abangakaze babhekane nale nhlekelele. Abasindile kufanele bakhuthazwe ukuthi babuyele eTokyo Sitshale cishe ama- $ 27.000 billion ekuqedeni ukungcola kwezakhiwo, imigwaqo, nezinye izindawo. Kufake nokususwa kwezigidi zamamitha-skwele womhlabathi ongaphezulu kanye nohlaza osekunqwabelene ezintabeni zamapulasitiki amnyama asalindile ukwazi ukuthi angazigcina kanjani esikhathini eside esizayo.
Zonke iziphathimandla zizama ukuheha izinkampani kuzo zombili imikhakha yezobuchwepheshe nezokudoba, phakathi kokunye. Ukwakha kabusha iTohoku kubalulekile ukuze lonke elaseJapan livuselelwe. Kufanele sikhuthaze ukuvuselelwa komnotho woke nabantu. Ngokusobala inkinga enkulu kunazo zonke kuze kube manje ukudilizwa kweFukushima. Futhi yilokho into edala impikiswano enkulu kakhulu inqubo yokususa uphethiloli oncibilikisiwe ophendulayo. Kungabiza cishe ama- $ 750.000 billion futhi ngeke kuphele kuze kube ngu-2050.
Ezinye izifundo kanye nokubuyekezwa kutholakale amazinga emisebe ephakeme kunokulindelekile kuzembozo zesikhashana zamakhemikhali amabili. Akukabikho ukuhlolwa kwangempela kwesimo sophethiloli esincibilikile semfucumfucu, kodwa zonke izinhlelo ezingenziwa ziyingozi impela. Abantu abaningi bacabanga ukuthi izindaba zenza izimonyo ukwenza abantu bathule kakhulu.
Namuhla inkinga eshesha kunazo zonke ukuthi akwaziwa ukuthi enzeni ngamanzi angcolile. Amanzi angcolile asetshenziselwe ukupholisa ophendulayo kanye nalokho okuputshuke ngaphansi komhlaba yize kwafakwa umgoqo weqhwa. Isimila senuzi sinesistimu yokucubungula esiza ukuqeda iningi lezinto ezinemisebe eyingozi. Kodwa-ke, ayikwazi ukususa i-tritium, eyi-isotope ye-hydrogen eyenzeka ngokwemvelo emvelweni.
Uhulumeni ukhuthaza ukulahla amanzi angcolile ePacific kancane kancane emashumini ambalwa eminyaka alandelayo, yize isiphakamiso siphikiswe ngokuphelele umkhakha wokudoba uqala ukuphakamisa ikhanda kule ndawo. Uma amanzi angcolile elahlwa kungaba nenye inhlekelele embi kakhulu.
Ngakho konke lokhu senza isifinyezo esifushane sezindaba ngemuva kweminyaka eyishumi yengozi yaseFukushima.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukwahlukanisa » Eminyakeni eyi-10 ngemuva kwengozi yaseFukushima